China Stainless simbi Hexagonal Bar Kugadzira uye Factory | Huaxiao
Hexagon bar chikamu chehekisi refu yakasimba simbi isina simbi, nekuda kwehunhu hwesimbi isina chinhu hexagon bar inoshandiswa zvakanyanya mugungwa, kemikari, kuvaka uye zvimwe zvinhu.
Sino Stainless Simbi kugona pamusoro kwesimbi isina tsvina Hexagonal bar
Saizi : 3mm-200mm, 1/8 ″ kusvika 8 ″
General Tsananguro Maitiro nezve isina simbi bar
Panyaya yesimbi isina tsvina bar rolling zviyero, iyo US, UK, Germany, France, Russia, Japan uye nyika dzese zviyero zvakasimukira, uye iyo US standard saizi shiviriro ndiyo yakaoma kwazvo. Izvo zvazvino zviyero zvesimbi isina simbi inopisa-yakakungurutswa profiles ndeiyi: ASTMA276 "Yakatemerwa Tsananguro yeiyo Isina Simbi uye Yekupisa-Inodzivirira Simbi Mabhawa uye Maprofayiri"; American ASTM 484 / A484M "Zvidimbu Zvese zveSimbi Isina Simba uye Inodziya-Inodzivirira Simbi Mabhawa, Mabhiridzi uye Kukanganwira"; ChiGerman DIN17440 "Zvemagetsi Zvimiro zveKununurwa kweiyo Isina Simbi Sheet, Hot Yakakungurutswa Strip, Waya, Yakavezwa Waya, Simbi Bhawa, Kugadzira uye Billet"; Japan JlS64304 "Stainless Simbi Tsvimbo". Mukutanga kwema1980, China yakabatanidza zviyero zveUnited States, Japan, Germany, yaimbova Soviet Union neInternational Organisation for Standardization (ISO), uye yakanangana neJapan JIS isina simbi tsvimbo zviyero, ndokugadzira iyo yenyika standard GB1220- 92 yesimbi dzesimbi, maererano nezvedzimwe nyika. Maitiro, iwo mwero wenyika GB4356-84 yesimbi dzesimbi dzesimbi dzesimbi dzakagadzirwa, izvo zvinoita kuti simbi dzakateedzana dzive dzakakwana, uye inotora zvigadzirwa zvinoshandiswa pasi rese senge United States neJapan. Mamwe masimbi esimbi esimbi muChina anoenderana nemaAmerican standard mamakisi, sezvakaratidzwa muTafura 1. Panguva imwecheteyo, inoramba iine anowanzo shandiswa mamaki muChina, ayo anonyanya kuenderana neasina simbi mamakisi enyika dzakasimukira senge United States, uye ine zvakawanda zvakasiyana-siyana. Inofananidzwa nenyika dzakabudirira, musiyano uripo pakati pematanho pachawo wakadzikira zvakanyanya, asi hunhu hwepasi uye kushivirira kwakasarudzika, uye mutsauko wemuviri wakakura.
Stainless simbi bhaa Kugadzira Maitiro
Bar yekugadzira mutsara maitiro: billet kugamuchirwa → kudziyisa → kuumburuka → kuveura kaviri → kutonhora → kuveura → kuongorora → kavha → metering → kuchengetedza.
Zvidimbu zvidiki zvinogadzirwa nezvigayo zvidiki. Mhando huru dzezvigayo zvidiki ndeizvi: kuenderera, semi-kuenderera uye kutwasuka. Parizvino, mazhinji epasirese matsva uye ari-kushandisa madiki anoenderera ekugaya. Anhasi anozivikanwa erebar miriwo ane epasirese-kumhanya kutenderera rebar chigayo uye mana-chidimbu chepamusoro-goho rebar mill. Iyo billet inoshandiswa mune inoenderera diki yekuumburudza chigayo kazhinji inoramba ichienderera ichikanda billet, uye urefu hwayo hwedivi kazhinji unowanzoita 130-160 mm, 180 mm × 180 mm, kureba kwacho kunowanzoita anenge 6-12 metres, uye iyo billet uremu i1.5 ~ 3 matani. Mitsetse yekuumburuka inowanzo rongedzwa nenzira yakatwasuka-yakatwasuka, ichiwana yakazara-mutsara isiri-torsion kutenderera. Huwandu hwezvikwata hunotsanangurwa nemusimboti wekuumburusa rack imwe pamwechete. Iyo inogaya zvigayo kazhinji kunyange akaverengerwa anopfuura. Kune 18, 20, 22 kana kunyange makumi maviri nemana emagayo madiki akasiyana akasiyana asina chinhu uye akapera saizi, uye gumi nesere ndiwo makuru. Yekumhanyisa-inogadziridzwa, micro-makakatanwa uye kusagadzikana-kusununguka kutenderera ndizvo zvinosarudzika zvemazuva ano zvese-zvinoramba zvidiki zvigayo Chikamu chekuumburuka kwakashata uye yepakati rolling furemu inodzorwa neyakaipisisa tension. Chikamu chepakati chinotenderera uye chigayo chekupedzisa hachina kunetsekana kuti uve nechokwadi chekujeka kwechigadzirwa. Zvichienderera mberi zvigayo zvinowanzove ne6 kusvika ku10 loopers, uye kunyangwe kusvika gumi nemaviri loopers.
Bhar rolling ndiyo yakapusa kuitisa mune zvese zvakapetwa zvinhu uye inogona kuitwa nenzira dzakasiyana. Kubva pamatatu-roller kusvika kune-kumonyoroka, kubva kuhafu-kuenderera kusvika kuzere-kuenderera, mabara anogona kugadzirwa, asi goho ravo, rakaringana kurongeka, chigadzirwa chakapedzwa, uye chiyero chekupasa chakasiyana zvakanyanya. Kuomarara kweiyo matatu-roll mill yakaderera, uye kuyerera kweye kupisa tembiricha kunozotungamira kune kwakakomba chigadzirwa saizi kuchinja. Uye zvakare, iyo inononoka kumhanya kweiyo kosi uye iyo yakareba nguva yekuumburuka inotungamira mukuwedzera kwemusiyano wekupisa pakati pemusoro uye muswe weiyo inotenderera stock, saizi yacho haienderane, uye mashandiro haana kuenzana. Kuburitsa kwakaderera kwazvo, iwo mhando unochinja zvakanyanya, uye iwo huwandu hwehunhu hwakaderera zvakanyanya. Yakazara-inoramba ichiumburuka mamiriya kazhinji anotora zvakapfava uye zvimwe, iwo anotenderera zvikamu haana kumonyaniswa, tsaona idiki, kuburitsa kwakakwira, uye hukuru hunyanzvi hwekugadzira uye hwesimba kuita kudzora kunogona kuitika. Panguva imwecheteyo, chigayo chinotenderera chinogadzika kuomarara, dhigirii rekutonga rakakwirira, uye chiyero chedivi uye chiyero chekupasa chave chakavandudzwa zvakanyanya, kunyanya chiyero chegoho chave chawedzerwa, uye kutambisa kwesimbi mukudzoka muvira kuderedzwa. Parizvino, kubhururuka kwebhawa kunowanzoitwa nhanho-yerudzi kupisa moto, yakanyanya-kumanikidza mvura kudonha, yakaderera-tembiricha kutenderera, isina musoro kutenderera uye mamwe maitiro matsva. Roll rolling uye yepakati rolling inogadziridzwa kuti ienderane nemabhiridha makuru uye nekuvandudza kutenderera kwakaringana. Kupedza chigayo Kunyanya kuvandudza kunyatsoita uye kumhanya.
Inofananidzwa neyakajairwa kabhoni simbi inopisa kupisa, iyo yekuumburudza tekinoroji uye maitiro esimbi isina simbi zvinonyanya kuratidzwa mukutarisa uye kuchenesa ingots, kudziyisa nzira, roll roll hole dhizaini, rolling tembiricha kudzora uye pa-pamhepo kupisa kurapwa kwezvigadzirwa.
Pashure: Isimbi isina tsvina Channel Bar
Zvadaro: 316L316 Cold Yakakungurutsirwa Isina Simbi machira (0.2mm-8mm)